သံမဏိကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကက်စမွန်စက်ရုံ - တရုတ်သွပ်သံကြိုတင်တင်ထားပြီးဖြစ်သောသခုံးရည်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - JT 545A JT 508A ပစ္စည်း - သံကိုကြို။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်အရွယ်အစား - ၁: ၂၅.၅ * ၁၃.၆၊ ၃၁.၅ * ၁၄.၉ ထုပ်ပိုးခြင်း - လက်ဆောင်သေတ္တာသို့မဟုတ်အညိုရောင်သေတ္တာ ၁။ သံမဏိချက်ပြုတ်ခြင်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးကိုအလေးချိန် - လျှင်မြန်ပြီးအပူပင်မရှိဘဲရယူပါ။ ဖြန့်ဖြူးခြင်း 2. သံမဏိဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ 3. လက်ဖြင့်ဆေးခြင်းသာလျှင်သံမဏိထက် ၄.၃ လောက်ပိုပေါ့ပါသည်
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - JTR ၄၂၊ JT ၅၅၀၀၊ JT5526 ပစ္စည်း - သံကြိုတင်တင်ထားပြီးအရွယ်အစား - ၁၀ * ၄.၈၊ ၁၂.၈ * ၆.၁၊ ၁၄ * ၆.၉ ထုပ်ပိုးခြင်း - လက်ဆောင်သေတ္တာ (သို့) အညိုရောင်သေတ္တာ ၁။ အလေးချိန်မပါဘဲသွပ်ချက်ပြုတ်ခြင်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးကိုရယူပါ။ - မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပင်အပူဖြန့်ဖြူးခြင်း ၂။ သံမဏိဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ 3. လက်ဖြင့်ဆေးခြင်းသာလျှင်သံမဏိထက် ၄.၃ လောက်ပိုပေါ့ပါသည်
ထုတ်ကုန်အမည်အမှုန့်အချင်း ၁၀ စင်တီမီတာ၊ ၂၆ စင်တီမီတာအမြင့် ၅ စင်တီမီတာ၊ ၁၁.၅ စင်တီမီတာရှိသောအမိုးရင့်သေတ္တာ (သို့မဟုတ်) အရောင်သေတ္တာတံဆိပ်ပါသောအနိမ့်သံထည်အသေးစား casserole ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ နှစ်ဖက်၊ မတူနိုင်သည့်အပူထိန်းထားမှုနှင့်အပူပင်ပေးသည်။ လက်ကိုင်များသည်လွယ်ကူစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုထားစဉ် FDA မှအတည်ပြုထားသည့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်သံမဏိများကိုချက်ချင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။